पार्टी भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा हुन्छ ! | Shirish News
पार्टी भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा हुन्छ !
तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एकिकरण सम्पन्न भई जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको केही महिना पुगेको छ । यस सुखद एकिकरणको प्रमुख श्रेय कसैलाई जान्छ भने त्यो हो आम मधेशी जनता र देशका सम्पूणर् सिमांतकृत समुदाय । अर्थात आम जनताको भावनाको जगमा उभेको छ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ।
जसपा निर्माणको प्रमुख उद्देश्य भनेको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउनु हो । राजनीतिलाई देश अनुकुलको पथमा डोर्याउनु हो । एकीकृत पार्टी जसपा संग नेपाली सिमांतकृत जनताको ठूलो आशा छ । देशमा अहिले कथित कम्यिुनिस्टहरुको हाली मुहाली रहेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा कम्यिुनिस्ट भनाउँदाहरुले अलोकतान्त्रिक परिपाटी बसाली रहेका छन् । एकातिर दुई तिहाईको नेकपा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ भने अर्कोतिर प्रतिनीधी सभाको चुनावमा जनताद्वारा पराजित नेताहरुलाई राष्ट्रियसभा जस्तो सार्वभौम र अति महत्वपूणर् स्थानमा धमाधम मनोनित गरिंदै छ ।
नेकपाका ठूला भनाउँदा नेताहरु आन्तरिक किचलोमा फसेका छन् । भागबण्डा र आफ्नै दलभित्र अमुक नेताको तुष्टिकरणका निमित्त आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिलाई बढाबा दिँदै आएको बिदितै छ । र सत्तारुढ दलको किचलोको कारण आम जनतामा यसको पत्यक्ष असर परेको टिप्पणी बिभिन्न कोणबाट आइ रहेको हुन्छ ।
यो प्रसंग मैले बिना अर्थ पक्कै उठाएको होइन । नेपाली आमजनता पुराना र ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको राजनीतिबाट थकित भैसकेका छन् । नढाँटी भन्दा, आम नेपाली जनता लामो समय देखि बैकल्पिक राजनीतिको तालशमा रहँदै आएका छन् । बैकल्पिक राजनीति अर्थात, नेता र पार्टीको स्वाथर्भन्दा पृथक सोँच र सिद्धान्त बोकेका पार्टी । संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र समग्रमा सामाजिक न्यायमा आधारित राजनीति गर्ने एउटा पार्टी जसले ‘सर्बजन हिताय’को मुलमर्म लाई दृढताका साथ पालना गरोस । हो, जनताका यी नितान्त महत्वकांक्षाप्रति संकल्पित रहेको कुनै पार्टी छ भने त्यो हो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ।
यो दलको नेतृत्व पुञ्जमा अनुभवीमात्रै होइन अपितु नेपाली एकात्मक सत्ता र यथा स्थितीवादी शक्ति बिरुद्ध लडेका योद्धाहरु हुनुहुन्छ ।आदरणीय महन्थ ठाकुर देखि लिएर उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोज्यूहरुको अग्रणी भूमिका रहेको जसमा नेपाल संग आमजनताको धेरै आशा रहेको छ ।
जसपा एकिकरणको प्रक्रियाजारी छ । एकिकरणको बिभिन्न आयाममा गहन छलफल ले निरन्तरता पाइरहेको छ । सारा संसार कोरोना महामारीसंग लडी रहेको बेला हामी पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनौ । प्रदेश नं. २ मा जसपा को सरकार छ ।
प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी जनता संक्रमित भएको अवस्था छ । एकातिर जसपाका प्रतिनीधीसभा सदस्यहरु लगायत प्रदेश २ को ध्यानाकृष्ट कोरोना महामारी बिरुद्धको लडाईमा केन्द्रित भएको छ भने अर्को तिर नव एकिकृत जसपा नेपाललाई जनताको भरोसालाई आत्मसात गरी अघिको यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीको कार्यमा हाम्रा आदरणीय नेतृत्वगण मनपेटले लाग्नुभएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा जसपामा आबद्ध सम्पूणर् तहका नेताहरुको आ-आफ्नै ढंगको भूमिका हुनुपर्ने हो । हरेक नेताले आफु भित्र रहेको सकारात्मक उर्जा पार्टी निर्माणमा लगाउनुपर्ने बेला हो यो । दुई पार्टीको मिलनबाट सम्भव भएको जसपा निर्माणमा कुनै पनि नेताले आफ्नो पुरानो दलको ‘ह्याङ्गओभर’ बाट आफुलाई मुक्त राख्नुपर्छ । संगठन निर्माण, पार्टी कार्यकर्ता बिच सदभाव, पार्टीमा कमीकमजोरी देखिँदा सभ्यताको प्रदर्शन गरी पार्टी वा सरकरलाई सुझाव दिने जस्ता रचनात्मक कार्यमा पार्टीका आमकार्यकर्ताले भूमिका खेल्ने बेला हो यो । हामीले जहिले पनि याद राख्ने कुरा के हो भने एउटा सामान्य कार्यकर्ताको बदनियत र गैर जिम्मेवारपूणर् अभिव्यक्तिका कारण सम्पूणर् पार्टीमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आमजनताले जसपामा लगाएको भरोसा प्रति कुठाराघात हुनसक्छ ।
हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुर हो भीकुनै पनि परिवार वा समाजमा अनुशासन नहुँदो हो भने उक्त परिवार वा समाजको प्रगति यात्रा लामो हुनसक्दैन् । राजनीतिक दल भनेको परिवार नै हो ।
तसर्थ पार्टीबारे अभिव्यक्ति दिँदा हामीले शब्द चयन देखि लिएर समय र सापेक्षतामा गहनता साथ ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ । हो यो सत्य हो, अहिले संसारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहस चलिरहेको बेला यो अधिकारबाट विश्वका कोही पनि जनता बञ्चित नहोस भने मान्यतालाई सदैव आत्मशात गरिनु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा अमेरिकाका सोह्रौँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अठारौँ शताब्दीमा भनेका अभिव्यक्ति सम्झीन उचित ठान्दछु । लिंकनले भनेका थिए, “मेरो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यहाँ सम्म मात्र सीमित छ, जहाँबाट तिम्रो स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ ।” लिंकनको यो भनाईलाई सापेक्षित चस्माले हेर्दा अहिलेको समयमा पनि उतिकै सान्दर्भिक लाग्छ ।
पछिल्लो समय जसपाका केही नेताजीहरु ले ‘पब्लिक डोमेन’मा दिनु भएका अभिव्यक्तिहरु खेदजनक छ र चिन्ताजनक पनि । पुरानो पार्टीको ‘ह्याङ्गओभर’मा रह्नुभएका नेताजीहरु गम्भिर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पार्टीमा बिचार राख्नु महत्वपूणर् कुरा हो । पार्टीलाई रचनात्मक सुझाब दिई आफ्नो स्तरबाट पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्नु पनि हरेक नेताको काम हो र पार्टीका शुभचिन्तकहरुको धर्म हो । तर अभिव्यक्तिको नाममा आफ्नै दलका मुर्धण्य नेताको आधारहिन आलोचना गर्नु एउटा सच्चा कार्यकर्ताको धर्म भित्र्न पर्नु पर्ने हो । जसपा एउटा यस्तो पार्टी हो जसभित्र ‘स्वराज’ छ । अर्थात बिचारको खुला बहाब प्रवाह र मन्थन गर्ने थलो हो जसपा । तर मर्यादामा बसेर । पद्धतीलाई आत्मशात गरेर । र यती मान्यतालाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौ भने जसपा अवश्य पनि देशको बैकल्पिक राजनीतिको मार्गदर्शक को रुपमा अघी बढ्ने छ । सबैको जय होस ।
Tags: जनता समाजवादी पार्टी नेपालजितेन्द्र यादव